कपडाको पालमुनि रुकमैनको कष्टपूर्ण जीवन |
कपडाको पालमुनि रुकमैनको कष्टपूर्ण जीवन
“न त घरमा एक गाँस अन्न छ, न त लगाउने लुगा नै, कसरी दिन काट्नु ? साह्रै चिन्तामा डुबेकी छु,” यसरी आखाँबाट आँसु झार्दै शम्भुनाथ नगरपालिका–३ नरही टोल बस्ने रुकमैन रामले भनिरहँदा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद तेजुलाल चौधरी एकछिन स्तब्ध बने ।
सदरमुकाम राजविराजबाट करिब २५ किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा पर्ने शम्भुनाथ नगरपालिका–३ नरहीमा गत माघ १ गते राति भएको आगलागीमा परी रुकमैनको एक मात्र घर (झुप्रो)सहित लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबै जलेर खरानी भएको थियो ।
छोरो जिवानन्द जन्मेको सात दिनपछि छोडेर हिँडेका श्रीमान् १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि फर्केर आएका छैनन् । पतिले साथ नदिए पनि जेनतेन छोराछोरी हुर्काएकी रुकमैनलाई यतिबेला भने थप सङ्कट पर्न थालेको छ । अब कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका छोरा जिवानन्दलाई कसरी पढाउने र छोरी जिबछीको विवाह कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले आफूलाई भोक न तिर्खा बनाएको बताउँदै रुकमैन भन्छिन् – “न जग्गा छ न त घर नै । के गरेर छोरालाई पढाउने ? अनि कसरी छोरीको बिहे गर्ने ?”
घरमा आगलागी भएपछि रुकमैनको परिवारलाई पुनर्बासका लागि कतैबाट सहयोग नभएको बताउँदै स्थानीयवासी रामपुकार राम भन्छन् – “आगलागी भएकै भोलिपल्ट रेडक्रसले केही राहत दियो । त्यसयता कसैले कुनै सहयोग गरेको छैन ।” विपद्मा परेकी रुकमैनको परिवारलाई सहयोगका लागि सहयोगी हात अघि बढ्नुपर्ने रामको भनाइ छ । रासस
#कपडाको पालमुनि रुकमैनको कष्टपूर्ण जीवन